Mametra-pialana amin'ny Compendium Blogware? | Martech Zone
Mametra-pialana amin'ny Compendium Blogware?
Asabotsy Jolay 18, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Eny, hanao izany aho. Niala tamin'ny Compendium Blogware tokoa aho. Toa mampihoron-koditra, sa tsy izany? Matetika ny fametraham-pialana dia misy dikany ratsy - fa tsy amin'ity tranga ity!
Ny sasany mety mieritreritra an'i Chris Baggott, Ali Sales ary voanjo tanteraka aho… nahoana no famintinana Avelao aho handeha? Fa maninona no avelako ny orinasa izay avo roa heny ny habeny isan-taona? Tiako i Compendium ary tian'izy ireo aho… nahoana no misy dikany ny fialako?
Ny valiny dia iray amin'ny fifantohana sy fotoana mety.
Na dia handeha aza aho asa miaraka amin'i Compendium - Tsy hiala amin'ny Compendium Blogware aho. Raha ny marina, Compendium no mpanjifa voalohany an'ny DK New Media, LLC - masoivoho vaovao. Izaho koa dia tompon-trosa ao amin'ny Compendium - rehefa nifandray tamin'ny orinasa hatramin'ny nanombohany. Hotohizako hatrany ny fahombiazan'ny Compendium, tohizako i Chris sy i Ali ho an'ireo fiasa sy fanatsarana :). Manangana ny masoivohako manokana eo ambanin'ny Compendium ihany koa aho… bebe kokoa momba izany avy eo.
Ny lakilen'ny fahombiazako tetezamita avy amin'ny Compendium dia ny fanomezana ny fifantohana sy ny fahalalana tsara indrindra ny mpanjifa. Miara-miasa akaiky amin'ny serasera mpanjifantsika, ny fahombiazan'ny mpanjifa ary ny ekipa mpivarotra izahay hahazoana antoka fa misy izany - ary hiasa hatramin'ny volana desambra.
Voalohany - andao hiresaka momba ny fifantohana.
famintinana orinasa teknolojia fa tsy orinasam-panompoana. Ny fahafahan'izy ireo mivoatra dia tratra tamin'ny alàlan'ny tsy fanalavirany ny baolina, tsy fanarahana ny tanjon'izy ireo amin'ny maha-sehatra fitorahana bilaogy orinasam-pandraharahana orinasa tsara indrindra (ary tena hany sehatra fitorahana bilaogy orinasa). Chris, Ali ary izaho dia maniry ny hitohizan'izany fifantohana izany.
Ny sehatra sy fotodrafitrasa - noho ny fahitan'i Blake Matheny sy ny ekipany - dia tsara kokoa noho ny zavatra hafa rehetra hitako. Ny orinasa dia afaka mitombo ambaratonga lehibe, tsy misy ny aretin'andoha sy ny fanaintainana henonao amin'ny orinasa teknolojia hafa. Fotoana izao hampitomboana be ny isan'ny mpanjifa te-hanararaotra ny sehatra sy hampiasa ny atiny biolojika ho an'ny paikadim-barotra miditra.
Manaraka izany ny fahafaha-manao
Fitorahana bilaogy sy fikarohana biolojika dia ampahany amin'ny piozila lehibe kokoa. Ny fitorahana bilaogy, ampiarahina amin'ireo paikady hafa - media sosialy, marketing amin'ny milina fikarohana, marketing amin'ny mailaka, serivisy ho an'ny mpanjifa, fifandraisana anatiny, fitarihana eritreritra, marika, ecommerce… mampitombo ny herin'ny media sy ny paikadim-barotra amin'ny Internet amin'ny ankapobeny. Ireo mpanjifan'ny Compendium Blogware dia mangataka fanampiana mihoatra ny teknolojia - ary te hanampy azy ireo aho.
Niara-niasa tamin'ny orinasa aho nandritra ny folo taona lasa, nanampy an'ity paikady ity, irery sy tamin'ireo orinasa toa ahy Gannett, ExactTarget, Patronpath ary famintinana - Webtrends, The Indianapolis Colts, Carhartt, Home Depot, Hotels.com, Icelandair, Tirerack, Cvent, RotoRooter, Eli Lilly, BlueLock, Ivotoerana data,… Mitohy hatrany ny lisitra.
Chris, Ali ary izaho dia nahafantatra an'ity volana lasa izay. Ny fotoana mety ho an'ny DK New Media ho sandry vaovao ho an'ny mpanjifa Compendium sy orinasa hafa hanampiana ny mpanjifa hampitombo ny fampiasam-bolany amin'ny fanaovana bilaogy, media sosialy, fikarohana, mailaka, sns. Miara-miasa akaiky amin'i Ali ao amin'ny Compendium aho mba hamolavola fonosana ho an'ny mpanjifa, avy amin'ny Social Media Integration, Call-to-Action Design ary programa fanaraha-maso, Design Blog sy fampidirana, Consulting Strategic isan-taona, sns.
Doug Theis avy any Ivotoerana data nampitaha ahy tamin'ny "CMO for Hire". Tiako izany, ary ny fahalalako ny haitao dia mivelatra be amin'izany. Ny fifandraisako amin'ireo matihanina hafa dia manome ahy, tsy amin'ny fahalalana ihany, fa miaraka amin'ny loharanom-pahalalana azo antoka fa afaka manampy ny orinasa hampivelatra ny vahaolana ilainy koa aho. Tsy te ho mpanolo-tsaina mahazatra anao aho - mandeha miditra ary milaza aminao izay mety ho fantatrao. Te ho mpiara-miasa aminao aho izay afaka manatanteraka ny paikady sy mampivelatra ny tena vahaolana.
Izaho dia nihaona ary namorona fiaraha-miasa tsy ara-potoana Roundpeg ho an'ny fifandraisana amin'ny daholobe, Evereffect ho an'ny karoka karama, Famolavolana alika 4 ho an'ny marika sy ny endrika, Doug Vann ho an'i Drupal, Squish ho an'i Joomla, Brandswag ho an'ny fampianarana sosialy, Noobie ho an'ny fampianarana teknolojia sy orinasa kely, Vondrona Tuitive ho an'ny fampiasana, Vahaolana BitWise ho an'ny vahaolana, Finday finday ho an'ny Marketing amin'ny finday, ProBlogService ho an'ny paikadin'ny atiny, Kristian Andersen ho an'ny paikadin'ny varotra orinasa, Fampahalalana Walker ho an'ny paikadim-pitokisana ny mpanjifa, mpanamboatra endrika an-tseraseraFormstack … Mandeha ny lisitra!
Ireto dia olona niara-niasa tamiko ary nitoky tamina akaiky ahy nandritra ny folo taona lasa. Manatanteraka ho an'ny mpanjifa izy ireo ary izy no tsara indrindra amin'ny liginy. Midika ve izany fa tsy hanohana ny orinasanao koa aho? Tsia mazava ho azy! Te hampitombo ny orinasanao aho ary azonao atao ny manampy ahy hamboly ny ahy. DK New Media, LLC. hanomboka ny 1 Aogositra 2009! Maharaha vaovao!
Eto ny hoavin'ny horonantsary sy fikarohana amin'ny finday!
10 tsy hita ao amin'ny bilaoginao
18 Jul 2009 amin'ny 5:39 PM
Miarahaba anao Doug! Toa fanapahan-kevitra mora izany. Faly aho amin'ny fitomboan'ny Compendium! 😛
18 Jul 2009 amin'ny 8:35 PM
Misaotra Joel! Ny Indiana rehetra dia tokony ho faly amin'ny fitomboan'ny Compendium - manome ohatra ho an'ny orinasa maro harahina izy ireo!
18 Jul 2009 amin'ny 5:44 PM
Tsia! Tsy afaka miala amin'ny Compendium ianao! Iza no horesahiko amin'ny fanaovana fanambarana manjavozavo tsy ampoizina momba ny fahaizan'ny teknikan'ny vokatra ankehitriny?
Sangisangy izany. Amin'ny fahamatorana rehetra, arahabaina tamin'ny fizotranao, Doug. Manantena ny handondona ny sahaninao farany indrindra aho (na dia hanampy anao hanatsara izany aza.) Fa azoko antoka fa mbola hahita zavatra lehibe avy aminao izahay amin'ny manaraka. Ny tsara indrindra - Manantena ny hahita inona aho DK New Media tsy maintsy entina any Indianapolis sy izao tontolo izao amin'ny ankapobeny!
18 Jul 2009 amin'ny 8:38 PM
Ny zava-misy i Compendium mampiasa ny fampiharana azy manokana hitondrana paikady ara-barotra miditra… atambatra amin'ny fitomboan'ny orinasa… tsy Robby manjavozavo na manonofinofy! Tsy misy orinasa SEO afaka 'miantoka' valiny - ary tsy misy sehatra rehetra! Ny fampiasan'ny olona ny lampihazo no zava-dehibe - ary eo no ahafahako manampy azy ireo.
Misaotra Robby! Mankasitraka ny fanohananana aho ary mankasitraka hatrany ny fananana olona iray izay miraharaha ampy handany fotoana sy hisedra ahy indraindray. Na dia diso indrindra aza ianao! (Mananihany).
18 Jul 2009 amin'ny 2:09 PM
toa fanapahan-kevitra hahasoa anao izany Compendium izany nefa koa mampitombo ny indostria any Indianapolis
18 Jul 2009 amin'ny 8:39 PM
Izay no jerenay roa, Nat!
18 Jul 2009 amin'ny 7:37 PM
Miarahaba anao Doug! Efa an-dàlana tsara ianao!
18 Jul 2009 amin'ny 8:29 PM
Ianao no lehilahy. Tohizo fa tsara!
Misaotra Kyle! Manantena ny hiara-hiasa aminao amin'ny orinasa maromaro!
18 Jul 2009 amin'ny 8:31 PM
Arahabaina! Tena manantena ny hiara-miasa aminao aho satria samy mandeha irery izahay!
18 Jul 2009 amin'ny 9:15 PM
Bravo, Doug. Mirary fahombiazana lehibe ho anao amin'ny asanao rehetra.
Jul 19, 2009 amin'ny 3: 47 AM
Doug, Arahabaina tamin'ny fifindra-monina. Tsy ho zavatra hafa ianao fa hahomby tanteraka. Jascha
Jul 19, 2009 amin'ny 8: 11 AM
Vaovao mahafinaritra Doug! Arahabaina amin'ny fanapaha-kevitra. Manantena ny handre tantara fahombiazana bebe kokoa.
19 Jul 2009 amin'ny 12:56 PM
Manantena ny hiara-miasa aminao amin'ny sahaninao vaovao!
19 Jul 2009 amin'ny 4:34 PM
Miarahaba anao amin'ny dianao vaovao! Mila fanampiana intsony? Te-hianatra bebe kokoa momba an'ity tsena ity aho ary hiasa amin'ny orinasa iray vonona handray risika ary hijanona eo ambonin'ny teknolojia farany.
Jul 20, 2009 amin'ny 2: 14 AM
Toa fotoana mety tsara ho anao sy ho an'ny Compendium. Mirary soa indrindra amin'ny zavatra rehetra! Fantatro fa handondona azy hiala ny valan-javaboary ianao. Mandehana maka azy DK!
20 Jul 2009 amin'ny 1:50 PM
Doka tsara e! Araka ny hitanao, misy filàna lehibe tsy ilaina izay manampy ireo fikambanana amin'ny habe rehetra mikendry ROI amin'ny alàlan'ny media sosialy. Manana fahaizana tsy manam-paharoa hampianarana orinasa ianao amin'ny fomba ahafahan'izy ireo ho tonga mpikambana tsara amin'ny fiarahamonina ary hahazo vola bebe kokoa. Mandresy Mandria 🙂
20 Jul 2009 amin'ny 2:40 PM
Tsy dia be loatra ny mpitondra any izay afaka mandrisika ny mpiasan'izy ireo toy izao. Tena misaotra anao aho noho ny fanohananareo rehetra nandritra ny taona maro. Manantena fahombiazana bebe kokoa amin'ny ho avy!
20 Jul 2009 amin'ny 2:14 PM
Voa teo amin'ny lohanao Doug. Heveriko fa nahita tsena tsara ianao, ary maodely fandraharahana matanjaka. Tohizo ny asa tsara.
Miarahaba anao Doug. Tonga hatrany amin'ny làlanao. Toa fandresena fandresena ho anao sy compendium.
23 Nov 2009 tamin'ny 3:28 PM
Misaotra Martine! Tsara ny Compendium tao anatin'izay volana vitsy izay. Tsy nisy fomba nahafahako nanao izany raha tsy teo izy ireo.
20 Jul 2009 amin'ny 3:54 PM
Miarahaba ny fiakarana an-tsehatra, Doug. Ny maodelin'ny orinasanao dia tena mandroso ary iray izay henoko bebe kokoa momba ny olona miresaka momba izany koa.
Ny saosy miafinao dia ny fahaizanao manampy lanja amin'ny zavatra rehetra kasahinao, ka tsy isalasalana fa hanohy hanao izany amin'ny fomba mivantana kokoa amin'ny orinasanao ianao.
20 Jul 2009 amin'ny 4:07 PM
Tena manaitaitra an'i Indy izany, ary ho antsika (Squish) ihany koa. Miarahaba anao nanao ny fitsoahana sy kudos ho an'i Chris nanohana anao!
23 Nov 2009 tamin'ny 3:27 PM
Misaotra Nicki! Ary ny orinasa… na kely aza… dia efa mandeha.
28 Jul 2009 amin'ny 8:36 PM
Salama Doug, zavatra tsara tarehy ny fitomboanao sy ny fahombiazanao. Maniry anao ho amin'ny farany fahasambarana sy fahombiazana. Misaotra fa nahazo aingam-panahy
Misaotra ny fanamarihanao tsara, Jim! Mbola mila mifandray aminao manokana sy manitatra ny fandaharana fitorahana bilaogy ianao.
20 Aogositra 2009 amin'ny 6:08 PM
Vaovao mahafinaritra, Doug. Miarahaba anao ary mirary soa indrindra amin'ny orinasa vaovao. Manantena ny hivoatra ny zavatra.
Sep 19, 2009 amin'ny 4: 23 AM
tsy misy dikany amiko izao. avelao any amin'ny google aho hanampiana ahy hanambatra ireo sombin-javatra. misaotra anao nampiditra ahy compendium. adala aho amin'izany. manantena fotsiny aho fa hahita fomba hanomezana azy io ho an'ny tranonkalako!
Sep 19, 2009 amin'ny 4: 43 AM
Jenny, resaka vidiny mifanohitra amin'ny vola azo azonao avy amin'izany daholo izany. :) Nalefa tao amin'ny BlackBerry Verizon Wireless ahy
Avy: Fampandrenesana IntenseDebate